Kutheni kubalulekile ukukhusela i-posidonia oceanica? | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Ipostidonia yolwandle Iyaziwa ngendima yayo kunxweme nakwimo yayo eyoyikisayo. Baninzi abantu abaziyo okanye abakhe beva nge-posidonia oceanica, kodwa abazi ukuba kutheni le nto ibaluleke kangaka kwaye yeyiphi imisebenzi abanayo.
Enye yezinto zokuqala zokwazi malunga ne-posidonia oceanica ukwahlulahlula kulwandle lwaselwandle. I-Posidonia ayisiyi-algae, sisityalo esingaphantsi kwamanzi. Ineziqhamo, iintyatyambo, amagqabi, isiqu neengcambu njengesityalo esiqhelekileyo. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba kutheni kubaluleke kangaka ukuyigcina?
1 Ipostidonia yolwandle
2 Ukubaluleka kweposidonia yolwandle
3 Yintoni echaphazela i-posidonia oceanica?
I-posidonia oceanica sisityalo esingaphantsi kwamanzi esidubula ngexesha lasekwindla kwaye sivelise iziqhamo ezaziwa njenge "olives olive". Sisityalo se-photophilic, oko kukuthi, sidinga ukukhanya kwelanga naxa siphantsi kwamanzi ukwenza i-photosynthesis. Ukongeza, i-posidonia isasazwe kwiilwandle ezenza ingca yaselwandle.
Omnye wemisebenzi enayo i-posidonia kukwenza ube sisalathiso esihle samanzi acocekileyo, kuba ihlala emanzini acocekileyo kuphela. Azichasani neendawo ezingcoliswe kakhulu, ezingenayo ioksijini, zinomdaka omninzi okanye zininzi izinto eziphilayo. Sisityalo esihlala sikho kwiMeditera, sibhengezwe njengeNdawo yeLifa leMveli lehlabathi yiUNESCO ukwamkela izibonelelo zayo ezininzi kwindalo esingqongileyo.
Ukubaluleka kweposidonia yolwandle
Omnye wemisebenzi ephambili ebonelelwa ngamadlelo otyani lwaselwandle Ziza kubonelela nge-biomass kunye neoksijini ukuvelisa indawo ezifanelekileyo zokuhlala iintlobo ezininzi. Ke ngoko, ukuba i-posidonia inegalelo ekusindisweni kweentlobo ezininzi, amanxweme apho ezi phanerogams zifunyenwe zandisa ukwahluka kwazo. I-ecosystem enentlobo ngeentlobo zeentlobo zezinto eziphilayo inobungozi obuncinci kwiimpembelelo ezinokuthi ziveliswe kuyo.
Omnye wemisebenzi ephambili ye-posidonia yile leyo yokunciphisa ukhukuliseko oluhlupheka ngamanxweme. Benza oku ngokunciphisa inani lentlenga eliza kunye namaza alibambe emathafeni. Ukongeza, benza izithintelo ngokuchasene namaza. Amathafa engca avelisa phakathi kwe-4 ne-20 yeelitha ze-oksijini ngosuku kwimitha nganye yesikwere, esenza owona mthombo ubalulekileyo weoksijini kwiMeditera. Inxalenye yale oksijini isasazekile kumoya womhlaba ngexesha lemveliso ephezulu.
Ukuba siqala ukubala inani leentlobo eziphilayo ezisindayo ngenxa yeepostonia meadows, sineentlobo zezityalo ezimalunga nama-400 kunye ne-1.000 zezilwanyana. Zonke ezi zinto ziphilayo zinendawo yazo yokuhlala kumadlelo eposidonia. Ke ngoko, ukulondolozwa kwala madlelo kubaluleke kakhulu ukuba sifuna ukugcina ezinye iintlobo ezongeziweyo. Ingca ikwangumhlaba olungileyo wokuzalisa izilwanyana ezinje ngeesiponji, i-starfish, ii-mollusks, amakhulu eentlanzi, iilwandle zaselwandle, njl.
Uninzi lweentlobo ezivelisa inzala kwi-posidonia meadows zinomdla omkhulu kwezorhwebo, ke ukutshabalalisa kwabo kungakhokelela kwiingxaki ezinkulu kuqoqosho lwasekhaya oluhlala ngokuloba. Ukuntywila kukhenketho kungaphulukana nokubaluleka okukhulu kunye nokutshatyalaliswa kweepostonia meadows. Kuqikelelwa ukuba izibonelelo zoqoqosho eziveliswa yimimandla yengca zikwi-14.000 euro ngehektare nganye ngonyaka.
Yintoni echaphazela i-posidonia oceanica?
Ukuhla komgangatho wamathafa engca kukhawuleza kakhulu ngenxa yeempembelelo ezenziwa ngabantu kuwo. Iimpembelelo ezinje ngokungcoliseka kweebhotile, ukugqitha kwezinto eziphilayo (ezinefuthe ekukhuleni ngokuchanekileyo kwesityalo) kunye nokufudumeza kwamanzi aseMeditera okubangelwe kukutshintsha kwemozulu zezinye zeziphumo ezitshabalalisa imihlaba ye-posidonia. Emva kwehlobo elishushu, izinga lokusweleka likhulu kangangokuba ilahleko ayinakulinganiswa nokukhula, ecotha kakhulu.
Enye yezenzo zabantu ezitshabalalisa uninzi lweepostonia meadows kukuloba ngokungekho mthethweni. Ingca ziyatshabalaliswa ngokuntywila, ukulahla inkunkuma, inkunkuma evela kwi-aquaculture, ukwakhiwa konxweme, ulwelwe olungenayo, njl.
Njengoko ubona, esi sityalo siluncedo kakhulu ukuba singasikhuseli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » Kutheni kubalulekile ukukhusela i-posidonia oceanica?
Amandla ahlaziyiweyo enza phantse i-400000 yemisebenzi eJamani
Izindlu ezenziwe ngomthi, indlela yokuzikhetha, izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga